Linux Mint 17 Qiana ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Linux Mint 17 Qiana ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | ဖြန့်ဝေ, အကြံပြုပါသည်
Linux Mint 17 ကိုမကြာသေးမီကကြီးမားစွာအောင်မြင်စွာဖြန့်ချီနိုင်ခဲ့သည်။ Desktop အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုနှစ်သက်စေရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောတိုးတက်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောရေရှည်အထောက်အပံ့ (LTS) သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းဖြန့်ဖြူးခြင်းမှသုံးစွဲသူများသည် Ubuntu နှင့်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားလမ်းကြောင်းယူပါ။ update ကို ငါတို့၏ တပ်ဆင်ပြီးနောက်လမ်းညွှန် သုံးစွဲသူများအား Linux အသစ်သို့ကူညီရန်
4. Winetricks (http://wiki.winehq.org/winetricks) .NET Frameworks, DirectX စသည့် Linux ပေါ်တွင်ဂိမ်းများလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်စာကြည့်တိုက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကူညီသည့် script တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
Linux အတွက်ရေနွေးငွေ့ (http://store.steampowered.com/search/?os=linux)
"cloud" ၏ခေတ်တွင်သင့်တွင် Dropbox အကောင့်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ Dropbox ကို Program Manager မှသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့၊ အောက်ပါ command ကိုသုံးပြီး install လုပ်နိုင်တယ် - sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Linux Mint 17 Qiana ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
58 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်း ၁၇၊ တင်ပို့ချက်အချို့တွင် mt 17 သည် mate 18 နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့် windows များအလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်း (ရွေ့လျားသောအခါ၎င်းတို့သည်အရွယ်အစားနှင့်အနေအထားကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြား distros များနှင့် desktops များဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သောဥပမာ - manjaro with lxde, ငါဒါကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဘယ်သူ့ကို deactivate လုပ်ရမလဲသိလား? ငါလက်ပ်တော့ပ်မှာ mt 17 mate ကိုစမ်းကြည့်တော့မင်းကငါ့ကိုရှာဖွေဖို့အချိန်တိုအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ ငါဘယ်လိုပြောမလဲ ငါလုပ်ခဲ့တယ်🙂
ငါ linux mint 17 ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်ဒီဘလော့ဂ်တွင်ဤကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်ပါသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့သာကျန်ရှိနေသည် ... နှုတ်ခွန်းဆက်သ
«ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချို့မှီခိုအမှားအယွင်းများ။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းတို့ကိုလျစ်လျူရှုရန်အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
မင်းမှန်ပါတယ်! တညျ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
နောက်တဖန်မင်္ဂလာပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည့်သီချင်းများ မှလွဲ၍ တေးသီချင်းဖွင့်စက်အချို့ကိုလည်းသင်ထည့်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မေးမြန်းချက်၊ တေးသီချင်း preview ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပိတ်ထားနိုင်မလဲ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။ ငါ mp3 file တစ်ခုကိုကူးလိုက်တိုင်းသူကဖွင့်သည်။
ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​အဲဒါကို disable လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုငါမတွေ့သေးဘူး၊ မဟုတ်ရင် Linux Mint ကိုငါအရမ်းနှစ်သက်တယ်။ မည်သူမဆိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ငါမှာမင်းမှာ Gnome desktop ရှိတယ်၊ ငါကြာမြင့်စွာမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်။ http://www.ubuntu-es.org/node/12916#.U5ECo67gIbI
ဤမေးခွန်းမျိုးအတွက် .. .. ဖိုရမ်ကိုသွားပါ။ သင့်ကိုအလွယ်တကူကူညီနိုင်မည့် .. .. နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ..
Rafa Huete ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ငါ Mint ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ပြီ၊ အခြားဖြန့်ဖြူးမှုများကိုငါကြိုးစားခဲ့သည်၊ နောက်ဆုံးတွင် Linux Mint သို့အမြဲတမ်းပြန်လာခဲ့သည်။
ငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ မင်းတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားငါသိချင်တယ်။ ခေါင်းစဉ်အောက်ပါဖြစ်၏ အဆင့် ၅ အထုပ်အနီများသည် update manager အတွက်ရက်ပေါင်းများစွာကြာနေခဲ့ပြီး kernel ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘူယျ linux-header ကို 5-3.13.0 / linux-image-extra24 ။ အများဆုံးထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်က၎င်းတို့အားမွမ်းမံသင့်သလားသို့မဟုတ်အဆင့် ၅ ဖြစ်ရန်ထားခဲ့ပါကဖြစ်သည်။
Rafa Huete အားစာပြန်ပါ
Comix ကို (၂၀၀၉) အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပြီး၊ သူတို့၏ MComix လမ်းဆုံလမ်းခွကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိမ့်မည်။ http://sourceforge.net/p/mcomix/wiki/Home/ Mint repositories မှာလည်း: http://community.linuxmint.com/software/view/mcomix .
အိုကေ။ ဒေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ဆုံးထွက်! 🙂
ငါ EQUALIZER ငါ Audacious ကိုသုံးသည်။ သူက၎င်း၏ညီမျှခြင်းနှင့်အတူပါပြီးပြီ။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါ pulseaudio-equalizer ကို install စရာမလိုပါ။
ဆက်လက်၍ MATE desktop ပေါ်တွင် cpu စားသုံးမှုမြင့်မားခြင်းက ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်အားသံသယဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် htop console နှင့်အမြဲတမ်း cpu ၏ ၇၀% မှ ၉၀% ကျော်ကြားသော cores ၂ လုံးနီးပါးကိုအမြဲပြသည်။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အလှပဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ Desktop ဟာကျွန်တော်နှစ်သက်သလို၊
သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ဒီ menu ကိုဘယ်အချိန်မှာပြုပြင်တော့မည်လဲငါဆံပင်ဆွဲရန်မဟုတ်ဘဲအသေးစိတ်ဖြစ်သည်
အရောင်ချွတ်ချွတ်ချွတ်နည်းနည်းသုံးပါ ... သို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုသုံးပါ။ အချို့သောအရာများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းပြီးနောက်, ဒုတိယအတွက် menu ကိုဖွင့်။
ငါ Mint 17 Cinnamon ကိုအခြေခံပြီး Mint OS X ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ အရမ်းပြီးပြည့်စုံတယ်။ ငါပျောက်နေတာကိုတွေ့တော့သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံကိုငါလိုက်မယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြားသိမှသာသိပြီး၎င်းသည်တကယ်အဆင်ပြေပါသည်။
နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု - Lock-num key ကိုအစမှမည်သို့စတင်မည်နည်း။
Alfonso Teijelo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် Ubuntu 12.04 မှ Mate 17 သို့ Mate သို့ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ဒီကိစ္စက ၂၄ နာရီမှမနက်ညနေအထိပုံစံပုံစံကိုဘယ်လိုပြောင်းရမှန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုဉာဏ်ထွန်းပေးနိုင်မလား?
Alfonso Teijelo အားပြန်ပြောပါ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီ link ကိုအတွက်အဖြေဖြစ်ပါတယ်။
လူးဝစ္စ: D ဟုသူကပြောသည်
mmmm ငါသူဒီငါ့ကို pc ပေးမယ်ဆိုတာငါသိချင်တယ်
AMD Radeon သည် ၇၅၂၀ ဂရမ် discrette-class ဖြစ်သည်
6gb သိုးထီး ddr3
ငါ ubuntu deb packages များနှင့် ubuntu version link ကို install လုပ်နိုင်မလားသိချင်တယ်
ကြောင်းစက်နှင့်အတူ, LM ပျံ!
ကောင်းတယ် linuxmint ယောက်ျားတွေဟာအရာရာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေကြတယ်။ လမ်းညွှန်ကဖြစ်သင့်သည် - ရိုးရှင်းပါတယ်၊ ကျန်အပိုင်းတွေကို software manager မှလုပ်တယ်။ ငါ LM17 Mate ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က install လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ kubuntu ကိုမသုံးခင်။ ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝအသုံးမပြုနိုင်ဘူး။ Mate သည်အကောင်းဆုံး desktop ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ ပြီးပြည့်စုံသည်။ Mint ဟာကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး distro ဖြစ်ပြီးငါ mint အတွက် ၀ ယ်ခဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး ၂၄ မော်နီတာ။ အလွန်ကောင်းသည်!
codec များပါ ၀ င်သောအခြား distro ရှိပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ linux ကိုတတိယအကြိမ်ကြိုးစားကြည့်တာ၊ ဒီတစ်ခါတော့ငါ mint 17 ကိုသုံးပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ငါနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေခဲ့သည်။ ငါလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်၏။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ ပြတင်းပေါက်များနှင့်ခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ ငါ ၁၀ ရက်နီးပါး ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်လောက်စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ကဒ်သုံးခု၊ hdmi / dvi / vga တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကဒ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဗီဒီယိုကဒ်တစ်ခုတည်းနဲ့မော်နီတာသုံးခုကိုငါမလည်နိုင်ဘူး။ ဗီဒီယို hdmi အသံနှင့်မပါလျှင်တိုတိုပြောရလျှင်အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာငါ mint ကို install လုပ်ခြင်း၊ ငါသာဖန်သားပြင်သို့သွားခြင်း၊ တတိယဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အသံနှင့်အတူတူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအရာရာတိုင်းကိုပြုလုပ်နေသည်။ သင်ခန်းစာအနည်းငယ်သာဤပြissuesနာများအကြောင်းပြောဆိုခြင်း၊ အမှန်တရားကတော့ဒီ linux ကိုကျွန်တော်အလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နားလည်ခဲ့သမျှကိုမသိခဲ့ပါဘူး၊ အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်တစ်ခု၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာကျယ်ပြန့်ခဲ့လျှင်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊
ကိုယ့် linux mint ကို install လုပ်လိုက်ရုံပဲ၊ ဒါက linux လောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းပဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ralink usb wifi ကဒ်အတွက်ယာဉ်မောင်းတွေတပ်ဆင်လို့မရသေးပါဘူး။
အကြံဥာဏ်များ ?? သို့သော်လည်းဤအပိုင်းတွင်ရှိသည့်အသိပညာကျွန်ုပ်၌မရှိကြောင်းသတိရပါ။
ယာဉ်မောင်းမန်နေဂျာကိုဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုရေးထည့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အနိမ့်အမြင့်၊ ပိတ်နိုင်သောမီးခိုးရောင်ဖန်သားပြင်အပြင်အခြားဘာမျှမရှိပါ။
ခင်ဗျားရဲ့ကူညီမှုကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီဆော်ဒီအာရေစီအပြီးမှာ၊ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲ ၀ င်ဖို့ကောင်းတဲ့အကြံကောင်းလားဆိုတာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ linux mint 15 olivia နှင့်ပြသနာများရှိတယ်၊ update manager ကိုငါစတဲ့အခါမှာဒါကငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။
W: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 ကိုရယူရန်မအောင်မြင်ပါ။ IP: 91.189.92.201 80] W: http: // ရယူခြင်းမအောင်မြင်ပါ archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/universe/binary-i386/Packages 404 မတွေ့ရ [IP: 91.189.92.201 80] W: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists ရယူရန်မအောင်မြင် / raring-updates / multiverse / binary-i386 / Packages 404 မတွေ့ပါ [IP: 91.189.92.201 80] E: အချို့သောအညွှန်းကိန်းဖိုင်များဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်သည်။ သူတို့ကလျစ်လျူရှုခဲ့ကြ, ဒါမှမဟုတ်အစားဟောင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေသည်မှာဖြစ်ပျက်နေသောအရာသည်မွမ်းမံရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်လိပ်စာကိုရှာ။ မရသောကြောင့်၎င်းသည်အိုင်ပီအတွင်းရှိအစုများကိုမွမ်းမံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့ကြိုးစားကြည့်ပါသို့မဟုတ်ထိုအထုပ်များအတွက်အခြားလိပ်စာတစ်ခုနှင့်စစ်ဆေးပါ မင်္ဂလာပါ
ငါ Mint နှင့် Cinnamon ကိုစမ်းချင်သည်။ သို့သော်မည်သည့် version (32/64) တွင် Samsung R480 မှတ်စုစာအုပ်ရှိသနည်း။ I3 - 3gb Ram ပါရှိသည်။ ၎င်းကိုပရိုဂရမ်တွင်သုံးလိုသည်။ ငါ့ကိုလမ်းညွှန်များ, နှုတ်ခွန်းဆက်အချို့ပေးစေခြင်းငှါမျှော်လင့်ပါတယ်။
David Bishop ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ Linux ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စတင်ပြီး Windows platform မှထွက်ခွာရန်ကြိုးစားသူများအတွက်အလွန်ကောင်းပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
David Obispo အားပြန်ပြောပါ
Rodrigo GARCIA ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလိုခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားခင်ဗျားကဒီစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာ PC တွေသူတို့ကျွန်တော့်ကိုကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။
RODRIGO GARCIA သို့ပြန်ပြောပါ
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါဒီမှာ Mint 17 Qiana နဲ့မင်းရှင်းပြတာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အဲဒါကို update လုပ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းငါ့ကိုမေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစကားဝှက်ကိုမသိဘူး၊ ငါအသုံးပြုသူရဲ့စကားဝှက်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး configure လုပ်တဲ့အခါမှာသင့်မှာ default administrator password ရှိသလား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း။
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါ့အမှားပဲ ငါစကားဝှက်ကိုမှားယွင်းတဲ့စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းတဲ့စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းစွာရေးထည့်မိပြီးသုံးစွဲသူအမည်နဲ့ပြင်ဆင်ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။
joaquin berrios ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် local canon i320 ပရင်တာကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါ။ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
joaquin berrios သို့ပြန်သွားပါ
အကြောင်းအရာ: Firefox သည်အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်နေခဲ့သည်။
အခြားအဖြစ်အပျက်များ (Mint 17 Qiana KDE နှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်သော) တွင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တကယ်လို့များငါ့ကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ရင် "နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲ" ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမမှတ်မိဘူး။ တရားဝင်စာမျက်နှာမှ .xpi plugin ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ငါ့ကိစ္စမှာတော့
Carlos Roberts သည် ဟုသူကပြောသည်
linux mint 17 quiana တွင် AWN ကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။ ????????????????
Carlos Roberts သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည် Linux mint ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ သို့သော် (၁၇) ခုတွင် chrome တွင်ပြproblemsနာများရှိနေပြီးယခင်ဗားရှင်းများတွင်ကျွန်ုပ်မတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း၎င်းသည်အတော်လေးနှေးကွေးသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက် ..
ကျွန်ုပ် Sis3Mirage ဗွီဒီယိုဒရိုင်ဘာများကိုကျွန်ုပ်ရရှိသောပြတင်းပေါက်များပေါ်တွင်ရှာ။ မတွေ့ပါ။ ယခု linux mint ကို install လုပ်ပြီးသောအခါ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နေရာမှရရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ၌သူ၌ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းထည့်သွင်းရန်အခြားသောနည်းလမ်းကိုသိထားလျှင်၊ ကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းသောဗွီဒီယိုသာဖြစ်သောကြောင့်။ ဝိုင်ဖိုင်၊ အသံကငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်။
LINUX MINT 201 QIANA လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် notebook နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော EPSON XP-17 ပရင်တာကိုမည်သို့လည်ပတ်မည်နည်း။
LINUX MINT 201 QIDA လည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့်ငါ့မှတ်စုစာအုပ်သို့ချိတ်ဆက်ထားသော Epson XP-17 ပရင်တာကိုမည်သို့လည်ပတ်မည်နည်း။
ဟိုင်းငါ့နာမည်ကဗာဂျီးနီးယားဖြစ်တယ်၊ ငါ Linux mint အတွက်အသစ်တစ်ခုပါ။ ငါ kickass စာမျက်နှာမှရေလွှမ်းမိုးမှတဆင့်ကူးယူသောအသံဖိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင်၎င်းတို့နားမထောင်နိုင်သည့်ပြhaveနာရှိသည်၊ အကြောင်းမှာအသံဖိုင်သည်သဟဇာတမဖြစ်သောကြောင့်အမည်ပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည် mp3 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် .mpeg လုပ်နိုင်သော်လည်းရလဒ်ကောင်းမရခဲ့ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအကြံပေးနိုင်လျှင်, ကြီးစွာသောအကူအညီလိမ့်မယ်!
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းလင်းမလားဆိုတာကြည့်ရအောင်။ Linux Mint အကြောင်းစပြောပြီးဆယ်လူလာကိုဆက်သွားတယ်။ Mint သို့မဟုတ် Cellular မှာပြtheနာရှိလား။ စကားမစပ်, mpeg သည် audio format မဟုတ်ဘဲ video + audio ဖြစ်သည်။ အသံပုံစံများ .mp3, .ogg, .aac, စသဖြင့်
သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်သို့သို့မဟုတ် ASK သို့သွားရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
Hello, linux mint quiana ယူဆောင်လာတဲ့ကွန်ပြူတာတစ်လုံး ၀ ယ်လိုက်တယ်။ Controller မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ folder တစ်ခုကို ၀ င်ချင်တဲ့အခါသူကစကားဝှက်ကိုတောင်းတယ်။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတာမသိဘူး။ ငါအဲဒါကိုငါ don fafrica ကနေယူလာတာလို့ထင်တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုနှင့်အတူငါ့ကိုကူညီနိုင်လျှင် t ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟဲလို ဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Ask FromLinux ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ask.fromlinux.net တွင်မေးမြန်းသင့်သည်။
လူးဝစ် Alfredo MOYA ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Linux Mate 13 ကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းကို ၁၇ ခုအထိ update လုပ်ချင်နေပြီးကျွန်ုပ်မသိတာကိုခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ။ သင်ကူညီနိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Luis - အ PEELED.-
Luis Alfredo MOYA သို့ပြန်ပြောပါ
Javier Arias ဟုသူကပြောသည်
ငါ linux mint Qiana နဲ့မင်း pic program လုပ်လို့ရမလား၊ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘယ်ပရိုဂရမ်ကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတာငါသိချင်တယ်။
javier arias အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ ငါ Linux လောကအတွက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင် Win17.1 နှင့်မျှဝေသောဗားရှင်း ၁၇.၁ (Rebbeca) ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ Mint version ကိုလေ့လာလိုသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးပါပြီ။ မီနူးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်၊ အရောင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစသည်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသော desktop environment သည် Xfce ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ? Linux Linux Mint Xfce "Rebecca" ကို install လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး၊ Wine ကို install လုပ်ပြီးဂိမ်းတစ်ခု (Borderlands) ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ သူကအဲ့ဒီ့အချိန်မတိုင်ခင်အထိအဆင်ပြေနေပုံရတယ်။ Pixel shader 3.0 "ပျောက်နေတယ်။ ဖြေရှင်းချက်ရှိရင်လမ်းပြမယ်။ ဂိမ်းကောင်းကောင်းရရင်လမ်းပြပေးနိုင်မလား။
Eric Moreno အားပြန်ပြောပါ
ဆာဗာ ၁၂၁၂ ဟုသူကပြောသည်
ဤ operating system နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသောအရာများကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ဤခေါင်းစဉ်တွင်မပါ ၀ င်သောသူများအတွက်။ ကောင်းတယ် 🙂
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux လောကမှာလူသစ်ပါ၊ linux mint 17 kinnamon ကို install လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကစလုပ်လိုက်ရင် cpu ကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုမောင်းသူအမှားကြောင့် vx900 Chrome9hd route ရှိလို့ပါ။ ကျွန်တော့် distro ကိုခံစားရန်ယာဉ်မောင်းအားမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်။
ငါ Mint ကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီ၊ အရမ်းကောင်းနေပြီ၊ ငါအရမ်းချစ်တယ်။
ငါ Linux Mint ကို PC ပေါ်မှာ MSI 760GM motherboard (Ati 3000 video onboard) နဲ့ပြတင်းပေါက်နှစ်ခုပါတဲ့ mode နဲ့ install လုပ်ခဲ့တယ်။
ငါအဆင့်2မွမ်းမံမှုများအထိလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။
Update Manager (ပုံ) မှ - Level3Updates ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သော packets များကိုအစားထိုးခြင်းအားတက်ကြွစွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အကြံပြုလိုပါသလား။
command များ: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ရှိပါသလား။ အဆင့် ၅ အထိအထိရရှိနိုင်သည့်မွမ်းမံမှုများအားလုံးကိုပြုလုပ်မည်လား။
၎င်းသည် Terminal မှမည်သို့ထိုးရမည်နည်း၊ သို့မှသာအဆင့်တစ်ခု၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုသာ update လုပ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ Level3or2အထိ?
မင်္ဂလာပါ ငါ Linux mint 17.1 ကိုပဲ install လုပ်ပြီး WiFi ကိုမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး၊ ယာဉ်မောင်းတွေပျောက်နေပုံရတယ်။ ၄ င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Alberto Garcia က ဟုသူကပြောသည်
Hi panas ငါ mintosx linux mint ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ အသံကငါ့ကိုမသိဘူးငါ client ကိုပြုပြင်မွမ်းမံချင်တယ် windows7ကိုမလိုချင်ဘူး linux mint ကိုသာလိုချင်တယ်သူကသူကိုအရမ်းကြိုက်တယ်၊
alberto garcia သို့ပြန်သွားပါ
Debian နှင့် Samba တို့ဖြင့် Active Directory ဆာဗာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ ပထမအပိုင်း
iCup 2014 Brazil - Linuxeros အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ